Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-31 07:39:11
လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၂၂ ဦး ရှိ
political prisoners mpc yangon
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-31 07:38:45
arrest protester pyay
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-31 07:15:30
ဟာဂျူလီ ကသာ’s Photos
ပူတာအိုမြို့တွင် ခရိုင်စာရင်းစစ်အား တပ်ထိန်းဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦးမှ ပစ္စတိုဖြင့် ပစ်သတ်..(ဟာဂျူလီ-ကသာ)
ကချင်ပြည်နယ်၊ပူတာအိုမြို့၊အိန်ဂျယ် ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွင် ၂၇၊၈၊၂၀၁၃ရက်နေ့ ည၉နာရီအချိန်က တပ်မတော်သားတစ်ဦးမှ အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ
သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်လိုက်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်၊ဖြစ်ပွားပုံမှာ ၂၇၊၈၊၂၀၁၃ရက်နေ့ ညအစောပိုင်းအချိန်က ပူတာအို တဆညတိုက်ခန်းတွင် ဖွင့်လှစ်
ရောင်းချနေသော အိန်ဂျယ် ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွင်တပ်ထိန်းဒုတပ်ကြပ်ခန့်စိန်နှင့် အဖွဲ့သည် မိန်းကလေးများနှင့်အတူ အရက်နှင့် အခြားအစားအသောက်များ လာရောက်စားသောက်
ခဲ့ကြပြီး ပြန်ပါသည်၊ည(၉)နာရီခန့်တွင် တပ်ထိန်းဒုတပ်ကြပ်ခန့်စိန်တစ်ဦးတည်း ပြန်လှယ်ရောက်ရှိလာပြီး အရက်ထပ်သောက်ရန် ဆိုင်ရှင်အား မှာကြားခဲ့ပါသည်၊ဆိုင်ရှင်မှ ၉နာရီ
ထိုးပြီဖြစ်၍ ဆိုင်ပိတ်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြရာ ဆိုင်အတွင်း စားသောက်နေသော ပူတာအိုခရိုင်စာရင်းစစ်ကိုလမင်းမောင်မောင်နှင့်အဖေါ်တစ်ဦးကိုကြည့်၍ သူတို့ကိုတော့ ဘာကြောင့်ရောင်း
တာလဲဟု မေးမြန်းရာ စာရင်းစစ်ကိုလမင်းမောင်မောင်၏ အဖေါ်မှာကြောက်လန့်၍ ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်၊ပူတာအိုခရိုင်စာရင်းစစ်ကိုလမင်းမောင်မောင်မှာ ဟန်မပျက်ဆက်လက်
စားသောက်နေရာ တပ်ထိန်းဒုတပ်ကြပ်ခန့်စိန်မှ မင်းကဘာကောင်မို့ ဆက်စားနေတာလဲမေးရာမှ စကားများကြပြီး တပ်ထိန်းဒုတပ်ကြပ်ခန့်စိန်မှ သူ့ပါလာသော ပစ္စတိုဖြင့် ကိုလမင်းမောင်မောင်၏
ဦးခေါင်းကို အနီးကပ် ပစ်သတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်၊ကိုလမင်းမောင်မောင်မှာ မန္တလေးမြို့နန်းရှေ့တွင် နေထိုင်သော ဦးခင်မောင်တင့် ဒေါ်ဝင်းမာတို့၏ သားဖြစ်ပြီး ပူတာအို
ခရိုင်သို့ ခရိုင်စားရင်းစစ်အဖြစ် ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင် ယခုလို ပစ်သတ်ခံရမှုဖြစ်ကြောင်သတင်းရရှိပါသည်၊ဒုတပ်ကြပ်ခန့်စိန်မှာ တပ်ထိန်းတပ်ရင်းမှ မဟုတ်လဲ ဗျူဟာ၏ တပ်ထိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်၊ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပါတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ကို
တင်ပြနိုင်ရန် ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး(၀၇၄း၂၁၄၄၄)သို့ ဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့သောင်္လည်း ဖုန်းကိုင်မည့်တာဝန်ကျ မရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကို ဖေါ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ၊(ဟာဂျူလီ-ကသာ)
အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေချည်း သတင်းကို သည်မှာ သိမ်းထားတယ်
ပဲခူးလယ်သမားအရေးကူညီဖို့သွားတဲ့ ဦးဝင်းချိုကို ပဲခူးမှာ ဖမ်းပြီ
အလုပ်ဖြစ်နေဆဲအိမ်မြေဈေးများ – သမ္မတဦးသိန်စိန်သမီးနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လိုခြင်း (၄)
ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါ။ အသက်ကြီးလာလို့ဟုထင်ပါသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ပျက်အများစုမှာ ကြေနပ်တာစရာများပါသည်။ အခုကိစ္စကိုတော့ အချိန်ယူ (နှစ်နဲ့ချီပြီး) ရှင်းရမဲ့ကိစ္စဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော၂နှစ်က အိမ်မြေဈေးနှုန်းအဆမတန် တက်သွားခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ကြီးကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်စဉ်းစားကြသည်။ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၆၂မှစတင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်မှာ နှစ်၅၀ကြာသွားသည်။ တိုင်းပြည်လည်း အဖတ်ဆယ်စရာမရှိသလောက် ပျက်စီးသွားသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးမှ အကျင့်ပျက်သူအလွန်များပြားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာ၊ သုတ္တကျမ်းတွင် ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ငွေရတတ်ခြင်း၂မျိုးကို မပေးပါရန်၊ ဆင်းရဲလွန်းပါက ခိုးယူအကျင့်ပျက်မည်ကိုစိုးရိမ်ရသို၊ ငွေရတတ်လွန်းပါက ဘုရားမေ့သွားမည်ကို စိုးရိမ်သည်ဟု ဆိုသည်။ လူတစ်ဦး၊ မိသားစုတစ်ခု၊ ကုမ္မဏီတစ်ခု ..ခပ်သေးသေးစဉ်းစားပါက ချမ်းသာလျှင် ဘုရားမေ့၊ တရားကိုကိုယ့်အကြိုက်လုပ်တတ်ကြသည်။ ဆင်းရဲလွန်းပါက အကျင့်ပျက်ပြီး၊ ခိုးယူတတ်လာပါသည်။
လူ့ဘဝတွင် များစွာသောအသီးအနှံကြဲသော်လည်း အသီးအနှံနည်းပါးရသည်။ စားရသော်လည်း ဝစွာမစားမသောက်ရကြ၊ အဝတ်ကိုဝတ်ရသော်လည်း နွေးစွာမဝတ်ကြရ၊ အလုပ်လုပ်၍အခရသော်လည်း မလုံလောက်သောအိပ်မှာသိုထားရသည်..စကားရပ်အတိုင်း လူလောကတွင်လူများစွာတို့သည် ချိုးခြံချွေတာရင်း သေသွားကြသည်။ ဥပမာ မက်ဒေါနယ်သူဌေးကြီးသည် ကွယ်လွန်သောအခါ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၈ထောင်ကျော် ချန်ထားခဲ့သည်။ သူ့ကို ချစ်မေတ္တာပြနိုင်သော ညစားသောက်ဆိုင်အလုပ်သမလေးတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သဖြင့် ထိုငွေအားလုံးသည် အလုပ်သမလေးလက်ထဲသို့ ရောက်သွားလေသည်။ အလုပ်သမလေးတဖြစ်လဲ ..သူဌေးမကြီးက ထိုငွေအားလုံးနီးပါးကို ဘုရားသခင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာများသို့ လှုဒါန်းပစ်လိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ဘဏ်ထဲစုထားသောပိုက်ဆံများ ပိုင်ရှင်လာမထုတ်ပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကောင့်အသေဖြစ်သွားပါက၊ ဆွေမျိုးရှာမရလျှင့် နိုင်ငံတော်က ပိုင်သည်။ ဘဏ်ကလည်း ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့် အခကြေးငွေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လောကတွင် ရှာသမျှငွေများကို သားစဉ်မြေးဆက် စားမကုန်အောင် စုဆောင်းပေးထားလိုသူများကို မြန်မာပုံပမာ ကဋေကြွယ်သူဌေးသား – ကောင်သေလင်းတကျ၏တည်း …ဟု ပညာမတတ်ပါက၊ ရှိသမျှအကုန်ပြောင်မည်သာဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ခေတ်ပြောင်းကာလအချိန်တွင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ် ဆိုသည့်အတိုင်း၊ ဂျပန်ခေတ်၊ ဒုကမ္ဘာစစ်တွင် ဓါးပြများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယခု မြန်မာပြည်ခေတ်ပြောင်းသောအခါ အေးဆေးစွာ၊ ပြောင်းလဲနေခြင်းမှာ ကျေနပ်စရာဖြစ်သည်။ လူသားဖြစ်သောကြောင့် မကျေနပ်စရာများစွာ ရှိနေသေးရာတွင် ခြစားမှုကို စိတ်အပျက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ကမ္ဘာ့ခြအစားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရသော်လည်း စစ်အစိုးကဖမ်းမည်စိုးရိမ်သဖြင့် မပြောရဲ၊ မပြောဝံ့၊ ယခုအခါ မီဒီယာ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်များဖြင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးထားသောကြောင့် ဖွဘုတ်အဖြစ် ဟုတ်ဟုတ်၊ မဟုတ်ဟုတ် ဖေါ်ပြနေကြသည်။
အိမ်မြေဈေးကြီးမှုသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင်သာမက၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် သိသမျှရေးပါမည်။ ကမ္ဘာ့ခြအစားဆုံး (အကျင့်ပျက်ဆုံး) မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ခြမစားဆုံး(အကျင့်မပျက်ဆုံး) စင်ကာပူနိုင်ငံကို ယှဉ်ရေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာအများစုတွင် ဝင်ငွေများသောအနောက်နိုင်ငံရောက်မြန်မာများက လစာကောင်းမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ စင်ကာပူရောက်မြန်မာများက ငွေစုဆောင်းနိုင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ယှဉ်ပြီး မြေဈေးကြီးမှုကို ယှဉ်လိုသော်လည်း ထိုင်း၊မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အိမ်ပိုင်သောမြန်မာများ အလွန်နည်းပါးသည်။ အမေရိကန်၊သြစတြေးလျှားရောက် မြန်မာများက လည်း စင်ကာပူကဲ့သို့သဘောထားနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန်၊ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းများ
အစိုးရတိုင်းသည် ပြည်သူလူထုအများစုကို စားဝတ်နေရေး၊ အဆင်ပြေရန် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး အိမ်မြေပိုင်ရေး၊ သက်ကြီးပင်စင်ကိစ္စများ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးရသည်။ အထူးသဖြင့် နေစရာသည် အရေးကြီးသည်။ ဝင်ငွေကောင်းပါက အိမ်ငှားခမထောင်းသာ၊ ဝင်ငွေမရှိပါက အိမ်ငှားခသည် ပြသနာကြီးဖြစ်လာသည်။ စင်ကာပူ၊ အမေရိကားတွင် အလုပ်မရှိလျှင် Homeless အိမ်ခြေမဲ့အဖြစ် ရှောက်သွားနေရသူများစွာ ရှိသည်။ အိမ်ငှားဖို့ပင် မတတ်နိုင်ပါ။ စားစရိတ်က သိပ်မကြီးလှပါ။ မြန်မာပြည်တွင် အလုပ်မရှိပါက တောပြန်ပြီး၊ ထမင်းနှင့်ငပိ၊ငြုတ်သီးစား နေလို့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဆင်းရဲနိုင်ငံများမှာ နေစရာထက်၊ စားဖို့ကို ပိုခက်ပါသည်။ ယခု မြန်မာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသဖြင့် ခုပဲ အနောက်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ချမ်းသာတော့မည့်အလား အိမ်မြေဈေးများ တဟုန်ထိုးတက်လာသည်ကို အစိုးရက ဝယ်ခွန် ၃၇%ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာထိပ်ဆုံးတွင် တန့်နေပြီဖြစ်သည်။ တက်ပြီးပြန်ကျလေ့မရှိတော့။ ငွေဖေါင်းပွနှုန်း Inflation က ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးပြန်ရောက်အောင် ဆွဲချမည်ဖြစ်သည်။ ၃နှစ်မှ ၅နှစ်ထိ စောင့်ရမည်။ ယခု သိန်း၁၀၀၀ တန်အိမ်သည် (1USD = 1000 kyat) ဒေါ်လာတစ်သိန်းနှင့်ညီမျှသည်။ နောက်၅နှစ်ကြာလျှင် (1USD=2000kyat) မလွဲမသွေဖြစ်လာတော့မည်။ ထိုအခါ သိန်း၁၀၀၀အိမ်ဈေးက မတက်၊မကျတော့ပဲဖြစ်နေမည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျပ်ငွေဖြင့် သိန်း၁၀၀၀ ဈေးပေါက်သော်လည်း ဒေါ်လာအားဖြင့် ၅သောင်းပဲ တန်ဖိုးရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ၅နှစ်အတွင်း အိမ်တန်ဖိုး ၂ဆ ပြန်ကျသွားမည်။ ကျပ်ငွေကိုသာ အာရုံထားသော ၉၀ရာနှုန်းသော မြန်မာများအဖို့ မိမိပိုင်သောအိမ်တန်ဖိုး ဈေးမကျဟု ဖြေပြီး၊ ကျေနပ်နေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာနှင့် ကူသန်း၊ရောင်းဝယ်နေသူအဖို့ ယခုအချိန်၊ သူပိုင်သော အိမ်မြေအများပြားမှာ သိန်း၁၀၀၀တန်အိမ်ကို ရောင်းချပြီး၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်သဖြင့် ငွေတိုးပွားလာဦးမည်။ နောက်၅နှစ်ကြာချိန် ကျပ်ငွေပြန်ပြောင်းပြီး အိမ်၂လုံးဝယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အချိုက စီးပွားမလုပ်တတ်သဖြင့် အိမ်ရောင်းလိုက်မှ၊ အိမ်လဲဆုံး၊ ရောင်းရငွေလဲဆုံး ဖြစ်သွားမည်ကိုသိသဖြင့် ဒီအတိုင်းပဲနေကြသည်။
၂၀၀၇တွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ချိန်၊ စကာပူနိုင်ငံသားများစွာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရသည်။ နိုင်ငံသားအားလုံးနီးပါးမှာ အကြွေးနှင့်အိမ်ဝယ်ကြသဖြင့် လစဉ်အိမ်ဖိုး Installment ဒေါ်လာ တစ်ထောင်မှ၊ နှစ်ထောင်အထိ ပေးသည်။ အလုပ်မရှိ၊ ဝင်ငွေမရှိသောအခါ အလုပ်သစ်ကလည်း အရင်လောက်လစာမရတော့။ အိမ်ကို အစိုးရထံထိုးအပ်လိုက်ရသည်။ (စင်ကာပူတွင် ၈၀% အိမ်အများစုမှာ အစိုးရကပိုင်သည်)။ စင်ကာပူအစိုးရတွင် အိမ်များစွာ ပိုလျှံနေပြီး၊ အရေးထဲ Reserve Money ဆိုသော ဒေါ်လာ ဘီလျှံ၂၀၀ကျော်မှာ ကမ္ဘာ့ ကုမ္ပဏီရှယ်ယာဈေးကသည်နှစ် တစ်ဝက်ခန့် တဟုန်ထိုးကျဆင်းသွားသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဘလျှံ၁၀၀ကျော် ကမ္ဘာ့စီးပွားကပ်နှင်အတူ ဆုံးရှုံးသွားသည်။ နိုင်ငံသေးသဖြင့် ပိုခံရသည်။ နိုင်ငံတွင်းမှ အလုပ်သမားများစွာ အလုပ်ပြုတ်ရာတွင်၊ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ သိန်းနှင့်ချီပြီး အလုပ်ပြုတ်၊ မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရသည်။ အိမ်ဈေးနှုန်းများမကျရန် အစိုးရက ရာဖြတ် Valuation ဖြင့်ထိန်းထားသည်။ လူများက အစိုးရရာဖြတ်ဈေးထက် လျှော့ရောင်းကြနေချိန်၊ အစိုးရက နိုင်ငံခြားသား တစ်သန်းကျော်ကို အမြဲနေထိုင်ခွင့် PR Permanence Resident ချပေးလိုက်သည်။ ထိုသူများက ငွေစုဆောင်းမိထားသူများဖြစ်သောကြောင့် ပိုလျှံနေသော အစိုးရအိမ်များကို ဝယ်ခွင့်ရသည်။ ထိုနည်းဖြင့် စင်ကာပူသည် နိုင်ငံခြားသားပေါင်းများစွာထံမှာ တစ်ဦးလျှင့် ဒေါ်လာတစ်သိန်းခန့် ပြန်ယူထားနိုင်ခဲ့သည်။
ယခု ၂၀၁၂တွင် အိမ်ဈေးများ ထပ်မံထိုးတက်လာသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကလည်း ၂၀၀၈နောက်ပိုင်း နာလံမထူးနိုင်သေးပါ။ စင်ကာပူတွင်လည်း အိမ်များစွာ ပိုလျှံနေချိန်က အိမ်ဝယ်ရန်၊ ဘဏ်ချေးငွေ ၈၀%နှင့်၊ ကျန်သော၂၀%ကိုလည်း ချေးရနိုင်သဖြင့် လူတိုင်း Cash down payment မလိုပဲ ဝယ်ခွင့်ရသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ဈေးများ ထိုးတက်လာရာ၊ ၂၀၁၂တွင် အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ စင်ကာပူနိုင်ငံသားများက အိမ်ကိုရောင်းပြီး အမြတ်ကိုထုတ်ယူ၊ နောက်တစ်အိမ်ကို ၈၀% ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ပြန်ဝယ်ကြသည်ဖြင့်၊ အိမ်အရောင်းအဝယ် အရမ်းကောင်းလာသည်။ အိမ်ဈေးအရမ်းတက်လာသဖြင့် စီးပွားရေးနလံထူနိုင်ပြီးဖြစ်သော စင်ကာပူအစိုးရက အိမ်ဝယ်သူများ ငွေသားမရှိပဲ ဝယ်မရအောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကျပ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ ဒေါ်လာတစ်သိန်း လက်ထဲမရှိလျှင် အိမ်ဝယ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားသည်။ အစိုးရတိုက်ခန်းအိမ်တစ်ခါေ၇ာင်းပြီး ၅နှစ်အတွင်း ပြန်မရောင်းရ သတ်မှတ်သည်။ ယခု ၂၀၁၃တွင် အိမ်အရောင်းအဝယ်မရှိသလောက်ဖြစ်သွားသည်။ အိမ်ဈေးလည်း တရိပ်ရိပ်ကျလာပါတော့သည်။ ဒေါ်လာ၎သိန်းတန် အိမ်ကို ငှားစားပါက တစ်လ ၂၄၀၀ဒေါ်လာ၊ တစ်နှစ်လျှင့်၂၈၈၀၀ ဒေါ်လာ (အိမ်တန်ဖိုး၏ ၇%) ရမည်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင် ဘဏ်တိုးနှုန်းသည် ၀.၂ရာနှုန်းသာရှိသည်။
စင်ကာပူနှင့်တိုးတက်သောနိုင်ငံများတွင် Valuation ဟုခေါ်သောအိမ်မြေတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း (ရာဖြတ်)သည် ၅%မျှပင် အတိမ်စောင်မရှိအောင် စနစ်ကျလှသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှရာဖြတ်များ တကယ်အရောင်းဝယ်တန်ဖိုး၏ ၃၃%ဖြင့် ရာဖြတ်ပေးခွင့် အောက်ပါဖြစ်ရပ်မျိုး စင်ကာပူ၊အမေရိကားတွင် သွားလုပ်မိပါက ထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျသွားနိုင်ပေသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ထိုသို့အစိုးရကိုခြစားမှ အိုကေသည်။
၂၀၀၇ မတိုင်မီကတည်းက တရုပ်နှင့်မြန်မာကုမ္ပဏီများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ လယ်မြေ၊ခြများစွာကို ဈေးသက်သာစွာဖြင့်၊ ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇နောက်ပိုင်းတွင် လယ်မြေကွက်သာမက မြို့ပေါ်မှအိမ်များပါ အရောင်းအဝယ် အရမ်းကောင်းလာသည်။ အရောင်းအဝယ် ကောင်းလာလျှင် ဈေးတက်လေ့ရှိသည့်အတိုင်း၊ ဝယ်ရောင်းလုပ်စားသူ၊ ငွေမဲပိုင်ရှင်များက အိမ်များကို ဆက်ကာ၊ ကုမ္မဏီငွေဖြင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အပြိုင်ပေးပြီး ဝယ်ယူကြသည်။ နောက်ဆုံး အရှေ့တောင်အာရှတွင် အိမ်မြေဈေးအကြီးဆုံး နိုင်ငံဘဝသို့ ရောက်သွားသည်။ စင်ကာပူတွင် ဒေါ်လာ ၃သိန်းတန်တိုက်ခန်းကိုလည်း မြန်မာပြည်တွင် ဒေါ်လာ၃သိန်းနီးပါးဈေးပေါက်သွားသည်။ ၇န်ကုန်တွင်သာမက နယ်မြိုအားလုံး ဈေးတက်သွားပြီး၊ အစိုးရကလဲ ၃၇% ဝယ်ခွန်တောင်းပြီး၊ ထိန်းချုပ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများက အိမ်မြေဈေး အဆမတန်ဈေးကြီးသွားခြင်းသည် တိုင်းပြည်စီးပွားပျက်၊ ခေတ်ပျက်သို့ ပိုပြီး ဇောက်ထိုးကျသွားရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေသူများသာမက နိုင်ငံခြား (စင်ကာပူ)တွင် ကုတ်ကပ်လုပ်ကိုင်ပြီး၊ စုဆောင်းမိသော ဒေါ်လာတစ်သိန်းကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး မြန်မာပြည်သို့သွားက အိမ်ဝယ်ရန် လိုက်စုံစမ်း၊မေးမြန်းသည်။ တပ်ခေါက်ပြီး ဈေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ပြန်လာရသည်။ ဒေါ်လာတစ်သိန်း (ကျပ်သိန်း၁၀၀၀) မှာ အိမ်ကောင်းကောင်း မရတော့ပါ။ ယခင်၂၀၀၆ခန့်က သိန်းတစ်ထောင်တန်အိမ်သည် ယခု သိန်း၅ထောင် အထက်ဖြစ်နေလေပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် သိန်း၁၀၀၀တန် အိမ်ကိုငှားစားပါက တစ်လ၂သိန်းခန့်သာရသည်။ တစ်နှစ် ၂၄သိန်း (အိမ်တန်ဖိုး၏၂.၄%) သာရသည်။ စင်ကာပူတွင် ၇% ရသဖြင့် မြန်မာပြည်သည် ၃ဆခန့် အိမ်ဈေးဖောင်းပွနေသည်ဟု သတ်မှတ်ရပေမည်။
အစိုးရဌာနအားလုံး မြေပိုင်ရှင်ကြီးများဖြစ်နေသည်။ (ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံ၊ တောင်ကြီးမြို့)
အိမ်မြေ၊ ၂ခု၊ ၃ခု ပိုင်ရှင်များအတွက် ယခုကာလသည် အလွန်ကောင်းသည်။ တစ်လုံးကို သိန်းတစ်သောင်းနှင့် ရောင်းလိုက်သည်။ ဒေါ်လာ တစ်သန်းရသည်။ စင်ကာပူတွင် ကုမ္ပဏီလာထောင်ပြီး အိမ်ဝယ်သည်။ ဒေါ်လာ၂သိန်းပေးလျှင် ကွန်ဒိုတစ်လုံး ၈၀% အကြွေးဖြင့် ဝယ်ရသည်။ အိမ်ငှားတင်လျှင် တစ်လ ၄၀၀၀ဒေါ်လာရသည်။ ထိုအိမ်ငှားရငွေကို လစဉ်အိမ်ဖိုး ဘဏ်ချေးငွေပြန်သွင်းခြင်းဖြင့် စင်ကာပူတွင်လည်း အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ အမေ၇ိကား၊ သြစတြေးလျားသွားပြီးလျှင် ဟိုမှာလည်း ကုမ္ပဏီထောင်ပြီး အိမ်ဝယ်ပြန်သည်။ နိုင်ငံခြာနေတာ သဘောကျသော ငယ်ရွယ်သူသားသမီးများကို နိုင်ငံခြားတွင်ထားခဲ့သည်။ သူတို့ကတော့ နိုင်ငံခြားမှ ပို့ပေးသောငွေဖြင့် နိုင်ငံတကာတွင် အိမ်ပိုင်ဖြစ်နေသည်။ စီးပွားလုပ်တတ်သောသူဖြစ်ပါက ခရိုနီဖြစ်လာတော့သည်။ ခရိုနီ၊ မိုနိုပိုလီ ငွေရှင်များသည် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများနှင့်ပေါင်းဖေါ်ပြီး လက်ဝါးအုပ်စီးပွားရေးများတွင် ပါဝင်က ဒေါ်လာတစ်သန်းသည် တစ်နှစ်အတွင် ၁၀သန်းဖြစ်လာသည်။ ၂နှစ်အတွင်း အိမ်မြေဈေးများကို အစိုးရက မည်သို့မျှမချုပ်ကိုင်နိုင်တော့ပါ။ အစိုးရတွင် အခြား Fire Fighting များစွာရှိနေသဖြင့် အိမ်မြေဈေးကို ခရိုနီများဦးဆောင်သော၊ မြန်မာလူထုကြီးက အဆမတန်ဖြစ်အောင် ဈေးမြှင့်ပေးလိုက်သဖြင့် တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အဟန်တားကြီးစွာဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဖားအံမြို့ကို ကြည့်ပါ။ ကရင်ပြည်နယ်တ&#
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-29 19:28:27
áá&sup2;á±á&frac34;áá¬áá·á&sup1; á±ááá¶á¯á¸áá° áá±áá¸áá°ááá&sup1;…
ရဲကြောင့် သေဆုံးသူ ကလေးသူငယ် ဆယ်တန်းကျောင်းသား မောင်ကောင်းဆက်ပိုင် ချမ်းမြ (မိုးမခပေးစာ)၊ သြဂုတ် ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့နယ်တရားရုံး ရာဇာဝတ်တရားသူကြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း(တ/၂၀၄၂) တရားရုံးတင်…..၂၃-၁-၂၀၁၂ခုနှစ်၊…
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-29 19:28:12
မုိုးမခ သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ရပ်ဆုိုင်းရေးကိစ္စ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့် မုံရွာအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဒီမုိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမျိုးသမီးကွန်ယက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် နော်အုံးလှအား မုံရွာတရားရုံးတွင် နံနက် ၁၁…
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-29 06:14:05
Kyi Linn’s Photos
ပုဒ်မ(၅)ဖြင့် အမှု့ဆင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရသည့် ရွာသားသုံးဦး နှင့်ပါတ်သက်၍ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမည့် ကိစ္စရပ်များအား တရားသူကြီးပါ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း(၈၈)ပြော။
“တရားရုံး ရောက်သွားတဲ့ အမှုပေါ်မှာတော့ ကျနော် တို့ပြောခွင့်မရှိတာမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ တရားခံတွေရဲ့ တင်ပြချက်တွေ အပေါ် တရားသူကြီးအနေနဲ့ တိတိကျကျ လေ့လာသင့်တယ်။—————– ရဲကတင်တဲ့ အမှုပေါ်မှာသာ လက်ခံစဉ်းစားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ————– ရဲနဲ့ပေါင်းပြီးရိုက်စား လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ လဲထွက်လာနိူင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်မှာ တရားသူကြီးတွေရဲ့ကဏ္ဍဟာအရေးကြီးသလို ကိုယ်ရဲ့ နောင်ရေးအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။” ဟု ၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)မှ တောင်သူလယ်သမားရေးရာ တာဝန်ခံ ကိုမျိုးသန့်မှ ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်နေ့ က ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင် မြို့နယ် ကလိုင်ကျေးရွာနေ လယ်သမား ဦးတင်ဝင်း၊ဦးစံမြင့်နှင့် ဦးပေါက်စီတို့သည် လယ်လုပ်ရန် သုံးခွမြို့နယ် ကရင်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ခိုင်းနွားများသွားရောက်ဝယ်ယူရာ သနပ်ပင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ေ၇းမှူး၊ကလိုင်းကျေးရွာ၊ကရင်ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၏ ထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ နွားအရောင်းအ၀ယ်စာချူပ်များ ယူဆောင်၍ ဘော့သပြေကန်ရွာသား (၃)ဦးအား ၀ယ်ယူလာသောနွား(၅)ကောင်အားမောင်းယူလာခိုင်းချိန်တွင် သုံးခွ-သန်လျှင် ကားလမ်းအနီးတွင် သုံးခွ မြို့နယ် မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်လင်းအောင် နှင့်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ဖမ်းဆီးရာတွင် တရားခံဟုစွပ်စွဲခံရသူ များနှင့်အတူပါလါသည့် ထောက်ခံစာ အထောက်အထားများကိုသိမ်းဆည်း၊၍ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ပြီးပုဒ်မ(၅)တပ်၍ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။၄င်းအမှုကို သြဂုတ်လ(၂၆)ရက်နေ့အထိ ခရမ်းတရားရုံးမှ စစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးဘဲ နွားပိုင်ရှင်များအားဖမ်းမိပြီးမှဆက်လက်စစ်ဆေးမည်ဟုသိရပြီး စက်တင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့ ကိုရုံးချိန်း သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရသည်။
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-28 23:44:37
Ma Thandar’s Photos
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-28 19:10:25
Kowai Lu’s Photos
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-28 00:51:18
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-27 19:44:29
” ၂၇.၈.၂၀၁၃ မုံရွာတရားရုံးကနေ ဒေါ်နော်အုန်းလှ စကားအမှာပါးပြီ “
အကျဉ်းခံစေတာ မှန်တယ်ဆိုရင် မညီမျှတဲ့ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ် နဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်အတွက်
ယုံကြည်ချက်နဲ့ ငြင်းဆန်ရဲတဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမျိုးသမီးကွန်ရက်မှ . . .
အမျိုးသမီးထု နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုခေါင်းဆောင် ဒေါ်နော်အုန်းလှ . . .
မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ဒေါ်နော်အုန်းလှ ၂၇.၈.၂၀၁၃ တရားရုံးချိန်းထုတ်ပါတယ် ။
ဒေါ်နော်အုန်းလှကို မေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်းမပြုပဲ တရားလိုကိုသာ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ရုံးချိန်းကို မနက်ဖြန် ၂၈.၈.၂၀၁၃ ပြန်ချိန်းတယ် ။ ဒေါ်နော်အုန်းလှကတော့ မိမိကိုယ် ယခုကဲ့သို့ ပုဒ်မတပ်ပြီး တရားစွဲတာဟာ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်နဲ့ညီမျှတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်
မုံရွာထောင်မှ မနက်ဖြန် ရုံးတော်သို့ နိင်ငံသားရပိုင်ခွင့်အရ ထွက်ဆိုရန် အကျဉ်းခံပြီး ငြင်းဆန် သွားမည်ဟု သိရသည် ။
မသန္တာ ၀၉ ၄၂၀၀ ၅၅၅၂၆
ရန်ကုန် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-23 04:02:36
ထားဝယ်ထောင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတစ်ဦး ပုံမှန်နေသားအတိုင်း လွတ် ******************************************** မ၀ါ (ခေါ်) မစမ်း၊ ပုဒ်မ ၁၇/ ၁ (ပေါက်ပင်ကွင်းရွာ၊ ကံပေါက်မြို့၊ ထားဝယ်ခရိုင်) ( မွန်သူပုန်နဲ့ ဆက်သွယ်တာကြောင့် ၂၀၁၀ မှာ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရ) ဟာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ၊ ထောင်တွင်း နေသား ၂ နှစ် ၆ လ နီးပါးရှိခဲ့ ပြီးတဲ့နောက် ဒီနေ့မနက် ၉း၀၀ နာရီမှာ ထားဝယ်ထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီလို့ သတင်းရပါတယ်။ ထောင်ပိုင်ကျန်ရက် ၇ ရက်ကို (ပုံမှန် လျော့ပေးတာက လွဲလို့) ဘာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါကြောင်း။
Ilegal Tax for import/export special items
မိုးမခပေးစာ၊ သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၃
အကြောင်းအရာ။ ။တရားမ၀င်ရေမဆေးကျောက်များ သယ်ထုတ်ရောင်းချခြင်းကိစ္စ နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ သိစေလိုခြင်း။
တရားမ၀င်ရေမဆေးကျောက်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်-ထုတ်ရောင်းချနေသည့် ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ဦးကျော်သန်းဝင်းသည် တရုတ်ပြည်သို့ တင်သွင်းပို့ဆောင်နေသည်မှာ ခေါက်ခေါက်ခါခါ အကြိမ်ပေါင်းများပြားလှပါပြီ။
ယခုလက်ရှိမှာလည်း တရားမ၀င်ရေမဆေးကျောက်များကို (၁၀)ဘီး – (၁၂)ဘီးကားကြီးများဖြင့် သယ်ယူလာခါ တရုတ်ပြည်သို့ ပိုဆောင်ရန် ကာမိုင်းမြို့နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်-နန်းသိန်း/နန်းယားရွာအထိရောက်နေပါပြီဟု ၄င်းကျေးရွာမှ အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦးမှပြောပါသည်။
ယခုသယ်ဆောင်လာသော တရားမ၀င်ရေမဆေးကျောက်များ၏ တန်ချိန်မှာ (၃၀၀)ကျော်တန်ချိန်ခန့်  ရှိနိုင်သည်ဟု ၄င်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားပါသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်းတရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သော လုပ်ကိုင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီများကို ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့သည်မှာလည်း (၁)ကျော်ခန့်ရှိပါပြီ။ သို့ပါသော်လည်း တရားမ၀င်ရေမဆေး ကျောက်များမှာ ဘာကြောင့်မို့ တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းမှ တရုတ်ပြည်သို့ အစဉ်အမြဲ ထွက်ရှိနေတာကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကို ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကို ဘာကြောင့်အရေးယူခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊မလုပ်တာပါလဲလို့၊ သို့မဟုတ် အဖွဲ့စည်းမို့လို့ ခွင့်ပြု (သို့ )နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်အစိုးရဌာန အသီးသီးက လျစ်လျူရူနေတာလားဆိုတာကို နိုင်ငံတော်မှ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို သိစေလိုပါသည်။
သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသော်လည်း သတင်းမှာ ထူးခြင်း မရှိပါကြောင်း သိရပါသည်။ အရေးမယူမဖမ်းဆီဘဲ ဆက်လက်ထွက်ခွါခွင့်ကိုသာ ပေးသောကြောင့် မအူပင်၊ကာမိုင်း ဧရာဝတီမြစ်အစဉ်အတိုင်း တောလမ်းမှ သြဂုတ် ၂၀ နေ့တွင် နန်းဆိုင်ယန် သို့သွားနေသည်ုဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းနန်းဆိုင်ယန်မှ တဆင့် KIA မှ တာဝန်ယူပြီး လိုင်ဇာသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောကြားပါသည်။
တဖက်မှာတော့ ဗန်းမော်မြို့နယ် လွယ်ကျယ်လမ်းမှ သစ်ကားများကိုတော့ ဖမ်းဆီးအရေးယူတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏
တန်ဖိုးများစွာရှိလှသော ကျောက်စိမ်း၊ တရားမ၀င်ရေမဆေးကျောက်များကို တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းမှ ထုတ်ယူပို့ဆောင်နေသည်ကို နိုင်ငံတော်မှ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို သိစေလိုပါသည်။
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-14 03:49:10
Photos from Mg Thant’s post in မန္တလေး သတင်း ပုံရိပ်များ
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-13 18:16:45
Htin Kyaw and3Activists Appear at Township Court for Protests without Permission
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ကိုထင်ကျော်အပါအဝင် ၄ဦး တရားရုံးထုတ် ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၅ဝဝနဲ့ ပုဒ်မ ၁၈တို့နဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အစာ…
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-13 17:12:19
Aungmyo Tun’s Photos
“အပြစ်ရှိသလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာ မေးမနေပါနဲ့ ။ မတရားသူတွေရဲ့ 
တရားစီရင်တာကို ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ် မပြုနိုင်ဘူး။
ကြိုက်သလို စီရင်လို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့်.. ဒါဟာမတရားမှုဘဲ”
ကိုစည်သူ (ခေါ်) ရဲနိုင်။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂)ရက်
နေ့ တွင် ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် (၃၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
(“ရှစ်စက္ကန့် ငြိမ်” မှ ကောက်နုတ်ပါသည်)
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-13 17:09:43
ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး ဆန္ဒပြသူများ ဖမ်းဆီးခံရ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် လက်ပန်းတာင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး မုံရွာမြို့မှာ ဒီကနေ့ နေ့ခင်းပိုင်းက ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အတွက် ၁၀ ဦး ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ လက်ပန်းတောင်းတောင် ဒေသခံ ၅၀ လောက်ဟာ ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး၊ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတဲ့ ရဲတရားခံတွေ ဖော်ထုတ်ရေး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကနေ နုတ်ထွက်ရေး စတဲ့အချက် ၄ ချက်ကို မုံရွာမြို့မှာ ချီတက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသူတွေထဲက နော်အုန်းလှအပါအ၀င် ၁၀ ဦးကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ မုံရွာ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ မြို့ခံတဦးက ပြောပါတယ်။ “နော်အုန်းလှတို့က ဆားလင်းကြီးဘက်မှာ ဆန္ဒပြဖို့အတွက် စာတင်ထားတယ်။ ခွင့်ပြုချက်တင်ထားတယ်။ ခွင့်ပြုချက်က ၁၄ ရက်နေ့ကို စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ရယ်၊ ဟောပြောခွင့်ရယ် နှစ်ခုတင်ရာမှာ ဟောပြောခွင့်ကို မရဘဲနဲ့ လှည့်လည် ဆန္ဒပြခွင့်ကို ပေးခဲ့တယ်။ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပေးတယ်။ နှစ်ခုစလုံးမရလို့ နော်အုန်းလှက မုံရွာဘက်ကိုလည်း တင်တယ်လို့ပြောတယ်။ မုံရွာဘက်မှာတော့ မရဘူး။ ဒီဘက်ကို ကျော်ပြီး ရောက်လာတဲ့အတွက် အခုလို ဖမ်းတယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရတယ်။” အခုလို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှုကို ဒေသခံတွေက မကျေနပ်တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြသမားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းရှေ့မှာ သွားရောက် စုရုံးနေကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ လတ်တလော မုံရွာမှာ ရဲက လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချထားပြီး တစုံတရာ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတာတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဖမ်းဆီးမှု အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မုံရွာ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ဖြေဆိုဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ by နော်နိုရင်း (ဒီဗွီဘီ)
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-08-13 14:34:53
လက်ပံတောင်းဒေသခံများ မုံရွာမြို့တွင်းသို့ လာရောက် ဆန္ဒပြရာ
ရဲနှင့်လုံထိန်းများမှ ဆန္ဒပြ ပြည်သူများကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသည်။
၂ ဒေါ်မာရွှေ (ဆည်တည်း)
၃ ဒေါ်ခင်မှတ်( ။ )
၄ ဒေါ်အေးမြ( ။ )
၅ ဒေါ်ဇင်မာရွှေ( ။ )
၆ဒေါ်ကြည်မြင့်နိုင်( ။ )
၇ ဒေါ်သန်းသန်းကြူ ( ။ )
၈ ဒေါ်အေးအေးငြိမ့် ( ။ )
၉ ဒေါ်ယင်နွဲ့ (တုံအလယ်ရွာ)
၁၀ ဒေါ်ခင်စိုးနွဲ့ (မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာ)